स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा प्रेस काउन्सिलले २५ पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्दै
मुख्य पृष्ठसमाचारस्वर्ण जयन्तीको अवसरमा प्रेस काउन्सिलले २५ पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्दै
विराटनगर ५ असोज । प्रेस काउन्सिल नेपालले स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा २८ जनालाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । ५० औँ वार्षीक उत्सवको अवसरमा विभिन्न विधामा २८ जनालाई पुरस्कृत गर्न लागेको हो ।
पुरस्कृत हुनेहरुमा प्रेस काउन्सिल गोपाल दास पत्रकारिता पुरस्कारबाट १ लाख ५१ ह्जार रुपैयाँ नगद सहित गोविन्दबहादुर थापालाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । यस्तै १ लाख ५ हजार नगद राशीको प्रेस काउन्सिल सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत पत्रकारिता पुरस्कार डा. सुरेश आचार्यलाई प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
५० हजार रुपैयाँ राशीको आचारसंहिता पुरस्कार नेपालगञ्ज दैनिकलाई, २० हजार राशीको भाषागत पत्रकारिता पुरस्कार सुनसरीका मो. हसन मियाँलाई दिने काउन्सिलले जनाएको छ । यस्तै जनही २० हजार राशीको कृयाशिल पत्रकारिता पुरस्कारबाट विराटनगरका अग्रज पत्रकारद्वय शिवबहादुर कार्की र यज्ञ शर्मासहित देशभरबाट ९ जनालाई, १५ हजार राशीको युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट १० जना पुरस्कृत हुने छन् ।
अन्य तीन पुरस्कार कर्मचारीलाई दिने प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । पुरस्कार असोज ६ गते विशेष समारोहकाबीच प्रदान गरिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।